आजबाट अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२२ ! - Shikhar Post Shikhar Post
आजबाट अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२२ !
काठमाडौँ – ग्रेगोरियन पात्रोअनुसार आजदेखि नयाँ वर्ष इस्वी सन् २०२२ सुरु भएको छ । जिजस क्राइस्टलाई फाँसी दिएपछि इस्वी सन्को सुरुआत भएको भन्ने भनाइ रहेको छ । पोप ग्रेगोरीले जुलियन पात्रो अनुसारको सन्लाई प्रतिस्थापन गर्दै अहिले प्रचलनमा आएको पात्रोलाई चलाएकाले यसलाई गे्रगोरियन पात्रो अनुसारको नयाँ वर्ष भनिन्छ ।
प्रकाशित मिति : शनिबार, १७ पुष २०७८ ०९:०९